I-Huawei Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa | I-Androidsis
Sele ifikile imini ebesiyilindile. I-Huawei Mate 20 entsha kunye ne-Mate 20 Pro sele zinikezelwe ngokusemthethweni. Uphawu lwaseTshayina lube ngomnye wabadlali abaphambili kwimarike ngonyaka we-2018. Ukuthengisa kwayo kunyuke kakhulu, kwaye sikwazile ukubona ukutsiba okukhulu kumgangatho kwiifowuni zayo. Into ecacileyo kwakhona kolu luhlu lutsha lweefowuni.
Ngezi Huawei Mate 20 kunye neMate 20 Pro, Uphawu lwaseTshayina lufuna ukuphucula oko kusebenze kakuhle ngoluhlu lwe-P20, eboniswe ngoMatshi walo nyaka. Ke iifowuni ezimbini ezisemgangathweni zisilindile, kunye noyilo lwangoku. Yintoni esinokuyilindela kwezi fowuni?
Zombini iimodeli Sele zinikezelwe ngokusesikweni kulo msitho uququzelelwe nguHuawei eLondon. Ke sele siyazi imigaqo yayo epheleleyo. Sithetha ngoku ngemodeli nganye nganye. Ukuze wazi okungakumbi malunga nenye yezi fowuni ukusuka kuluhlu oluphezulu lweHuawei.
2 I-Huawei Mate 20 Pro
Siqala ngefowuni enika igama layo kulo mvelisi mtsha wokugqibela. Kwezi nyanga bekukho ukuvuza okuthile, enkosi apho siye sakwazi ukufunda ulwazi malunga nalo. Kodwa bekungekho nanamhlanje apho sinayo yonke idatha kwesi siphelo siphezulu. Oku kukucaciswa okupheleleyo kweHuawei Mate 20:
Ukubalulwa kobugcisa iHuawei Mate 20
Umzekelo Umlingani 20
Isikrini I-6.53-intshi FHD + ene-18.7: 9 ye-HDR ratio
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128 GB (iyandiswa ngeNMCard)
Ikhamera esemva I-16 + 12 + 8 MP eneendawo zokubeka f / 2.2 /1.8 kunye f / 2.4
Conectividad I-GPS ye-Bluetooth 5.0 i-USB Type C ye-Wifi ac 3.5mm jack
Ezinye izinto I-IP53 NFC yangasemva yeminwe yeminwe yokubona ebusweni
Ibhetri I-4.000 mAh ngokutshaja ngokukhawuleza okukhulu nangaphandle kwamacingo
Ubukhulu 157 x 75 x 7.9 mm kunye ne-193 gram yobunzima
Ixabiso 799 euro
Oku kubhejwa kweHuawei Mate 20 kwiscreen esikhulu kwezi zixhobo zimbini athe umenzi wazisa. Iya kuba nescreen se-intshi ye-6,53. Sifumana inotshi kuyo, nangona kule meko kuyinto yenotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi. Incinci kwaye inobulumko ngakumbi, ngenxa yoko ayilawuli isikrini kangako. Ngokuqinisekileyo abaninzi baqinisekile ngakumbi ngolu luyilo kwinqanaba eliphezulu. Nangona isenza kucace ukuba iinotshi zifikile kwintengiso ukuhlala.
Kwesi sizukulwana sitsha, Uphawu lwaseTshayina luzisa ikhamera yangemva kathathu kuzo zombini iimodeli. Le Huawei Mate 20 ifika nekhamera kathathu. Yindibaniselwano yeelensi ezenziwe nge-12-megapixel main sensor kunye nef / 1.8 aperture, enye i-16-megapixel wide-angle sensor nge f / 2.4 kunye ne-17mm aperture, kunye ne-8-megapixel sensor yokugqibela yomnxeba. Ziya kuxhaswa bubukrelekrele bokuzenzela, obuza kusivumela ukuba sibe neendlela ezongezelelweyo zokufota ngawo onke amaxesha. Phakathi kwazo siya kuba nefuthe njenge-bokeh okanye imo ye-portrait.
Ibhetri yenye yamandla ayo. Inkulu kunaleyo yesizukulwana esidlulileyo, ngomthamo we-4.000 mAh kule meko, kunye neempawu ezinje ngokutshaja okukhawulezayo kunye nokungasebenzisi cingo okuya kuthi ngokuqinisekileyo kuqinisekise abathengi. Nangona inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza ikhethekileyo kwenye imodeli. Njengenkqubo yokusebenza, iza ne-Android 9.0 Pie ngokwendalo kunye nohlobo lwamva nje lwe-EMUI, uguqulelo 9.0 lomaleko ngokwezifiso.
Kubasebenzisi abanomdla, kuya kuba lula ukuthenga ifowuni ngemibala eyahlukeneyo. Iya kufumaneka ngwevu, luhlaza, mnyama namnyama. Inguqulelo yeTwilight igcinelwe kuphela imodeli yePro yoluhlu.
Kwindawo yesibini sifumana le modeli yenye. IHuwei Mate 20 Pro iba yeyesibini isiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina ngokuba neekhamera ezintathu zangasemva. I-brand iye yaba yenye yeebhentshi kwicandelo lokufota ngenxa yoluhlu oluphezulu, into abafuna ukuyigcina nale modeli. Nangona ingemi ngaphandle kuphela kwiikhamera zayo, kuba kwinqanaba lenkcazo ayidanisi. Oku kukucaciswa okupheleleyo kweHuawei Mate 20 Pro:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiHuawei Mate 20 Pro
Umzekelo Umlingani 20 Pro
Ubukhulu X x 157.8 72.3 8.6 mm
Ixabiso 1049 euro
Uphawu lwaseTshayina lusibonisa ngesiphelo esiphakamileyo ngokungathandabuzekiyo siphezulu kwi-Android ngokweenkcukacha. Uyilo lwayo, kunye neglasi ngasemva. Ifemi yazise uhlobo olutsha lweglasi yesixhobo, ekulula ukusibamba nokuthintela ukuba singaphumi esandleni sakho xa usibambile. Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyoI-Emerald eluhlaza, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ebusuku, iphakame ngegolide kunye nombala weTwilight, i-gradient, efana neP20 Pro.Ukuya kuyilo, ifowuni ibheja kwinotshi yobukhulu obubonakalayo kwiscreen sayo. Yeyona nto itsala umdla.
I-Huawei Mate 20 Pro ine-4.200 mAh ibhetri, eyinkqubela phambili kwisizukulwana esidlulileyo, ukongeza kukhuphiswano lwayo oluphambili. Ukongeza, i-brand yazisa ngokutshaja okukhawulezayo kwe-40W. Yi-70% ngokukhawuleza kunokutshaja kwezinye iimveliso. Ke ifowuni inokuhlawuliswa ukuya kuthi ga kwi-70% kwimizuzu nje engaphantsi kwe-30. Ukuguqula ukutshaja ngaphandle kwamacingo kukwaziswa, okuvumela ukutshaja ezinye iifowuni okanye izixhobo ngesixhobo. Ke kuyaboniswa ukuba ibhetri iya kusinika ukuzimela okukhulu, kangangokuba sikwazi ukubiza ezinye izixhobo ngayo.
Unxibelelwano kunye nesantya zezinye izitshixo. Ngokwenkampani ngokwayo, kunokwenzeka ukuba ukhuphele imovie ye-HD kwimizuzwana eli-10 kuphela. Unxibelelwano lwe-Intanethi luya kuthi luxhamle, siya kuba nakho ukushenxisa umnatha ngesantya esiphezulu ngalo lonke ixesha. Enye into ephucukileyo kwesi siphelo siphezulu.
Iikhamera yenye yamandla kwaye iya kutsala umdla we-Huawei Mate 20 Pro. Ikhamera engemva kathathu, Ilungiswe ngemilo yesikwere kwifowuni, ecaleni kweFlash yayo ye-LED. Kuza kuxhotyiswa bubukrelekrele bokuzenzela, obuya kusinceda sithathe iifoto ezingcono kuzo zonke iintlobo zeemeko. Uhlobo lwentengiso lubhengeza ukuba kuya kubakho ukuthatha imifanekiso kuzo zonke iintlobo zeemeko. Siza kuba nemisebenzi efana nemowudi ye-portrait okanye isiphumo se-bokeh, phakathi kwabanye abaninzi. Iikhamera zezinye zezitshixo zokugqibela. Abayi kudanisa nantoni na.
Kuza nokuqinisekiswa kwe-IP68, evumela le Huawei Mate 20 Pro ukumelana nemizuzu engama-30 kwiimitha ezi-2 ubunzulu emanzini. Ke iyamelana nokutshiza kunye nothuli, ngokungathandabuzekiyo oluya kuthi lubanike abasebenzisi uxolo oluninzi lwengqondo kwimeko yengozi. Akukho nto iya kwenzeka kwisixhobo.
Isixhobo siza nemisebenzi eyahlukeneyo eyongezelelweyo, ngenxa apho sithsaba njengeyona modeli inamandla. Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe kwiscreen kule meko. Ukongeza, ine-3D yokuqonda ebusweni, eya kuvumela umsebenzisi ukuba ayivule ifowuni ngamaxesha onke. Yinkqubo efanayo nale siyaziyo kwi-ID yobuso. Kwakhona, sinempawu ezinje ngeHiVision, eluhlobo lweGoogle Lens. Iya kusinika ithuba lokuqonda izinto ngalo lonke ixesha-
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokunikezelwa kwabo, amaxabiso ezi fowuni avuza. Ke kunomdla ukukwazi ukujonga ukuba ingaba oku kuvuza kuchanekile na. Kucacile ukuba ezi Huawei Mate 20 kunye neMate 20 Pro ayizizo iifowuni ezingabizi, kwaye iya kuba yenye yezona zibiza kakhulu kwikhathalogu yohlobo lwesiTshayina.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, zombini iifowuni ziya kufumaneka ngemibala eyahlukeneyo. Kwimeko ye-Mate 20 baya kuba: ngwevu, luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama namnyama. Ngelixa iMate 20 Pro iya kufumaneka kwi: emerald eluhlaza, ezinzulwini zobusuku luhlaza okwesibhakabhaka, igolide evukileyo, emnyama kunye neTwilight, eyithoni yegradient, edume kakhulu kulo nyaka.
IHuawei Mate 20 izakuthengiswa ngo-Okthobha, ke iya kufika kwimarike kungekudala. Inye kuphela inhlanganisela ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, okuyi-4/128 GB. Esi sixhobo siza kubetha kwimarike yaseSpain ngexabiso lama-euro angama-799.
Kwelinye icala sineHuawei Mate 20 Pro.Iya kuba yeyona nto ibiza kakhulu kwiifowuni ezimbini zenkampani, ukuba ngamaxabiso ayo eSpain nge-1.049 euros. Ixabiso eliphezulu ngokumangalisayo, elihambelana nokuvuza kwiveki ephelileyo, eyathi eli iya kuba lixabiso eliza kuba nalo eYurophu. Njengomnye umfuziselo, uza kuphehlelelwa kwintengiso ngo-Okthobha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro: Isiphelo esitsha sikaHuawei